Nhau - Iyo coefficient ye auto zero kusvika pahuwandu hwese inokwira, uye kuwedzera kuri kuita kwezvikamu mutengo kuri pachena
Musi waChikumi 2, China Inishuwarenzi Yekutsvagisa Institute of Automotive Technology (inozodaidzwa kunzi China Inishuwarenzi Yekutsvagisa Institute) yakaburitsa nhanho nyowani yemotokari zero kune zviyero zvekutsvagisa zviyero, kuburitsa iyo auto zero kusvika kuhuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwemhando zana.
Zvinoenderana nedudziro yakapihwa neChina Inishuwarenzi Yekutsvagisa Institute, auto zero kusvika kuhuwandu hwehuwandu hweeffeureti inoreva chiyero chemutengo wega wezvikamu zvemotokari kumutengo wekutengesa wemotokari yese. Sekureva kweChina Inishuwarenzi Yekutsvagisa Boka, iyo auto zero kune yakazara chiyero zvinonzwisisa shanduko dzevatengi 'mota mutengo mutoro uye auto inishuwarenzi muripo mutengo. Muchidimbu. Izvi zvinoreva kuti iyo yakakwira iyo coefficient ye zero kusvika pahuwandu hwakazara, inowedzera mutengo wekutsiva kana kugadzirisa zvikamu.
Zvinoenderana neazvino data eChina Inishuwarenzi Yekutsvagisa, iyo "auto zero kune yakazara reshiyo zana index" uye "zvakajairika zvikamu mutoro zana index" yakawedzera zvakanyanya, iine 350.93% uye 17.31% zvichiteerana, ichiwedzera ne13,96% uye 1.15% zvichiteerana zvichienzaniswa neiyo nguva yapfuura. Pakati pavo, iyo 2017 Beijing Benz C-kirasi mota ine yakakwira zero kusvika kuhuwandu hwehuwandu hweyakaenzana yaive 823.59%. Iyo data inoratidza kuti kana 2017 Beijing Benz C -kirasi ikabvarurwa, mutengo wepakutanga wezvikamu zvese unogona kutenga 8 yakazara mota dzemhando imwechete.
Pakati pezvinhu gumi nezvisere zvakajairwa izvo SINOSURE inotarisa kwazviri, mutengo wepakati wezvinhu gumi nenomwe wakakwira kupfuura danho munaKurume 2019, uye mutengo wezvinhu makumi manomwe nenomwe wakawedzera. Kunyanya, gonhi remusuwo wepamberi, kumberi fender uye gonhi remukova kumashure ndizvo zvikamu zvepamusoro; Pakati pezvikamu chimwe chete, zero kusvika pazere reshiyo yemusoro weiyo 2020 FAW Audi q5l iri 10.56%. Uye zvakare, iyo mota zero kune yakazara reshiyo coefficient, zvakajairika zvikamu mutoro index, imwechete chidimbu zero kune yakazara chiyero chepamberi bhamba ganda, uye kamwe chete chidimbu zero kune yakazara chiyero chepamberi mwenje we300000-500000 yuan mamodheru ndiyo akakwirira.
Mukuona kwemaindasitiri emukati, kusimuka kwe auto zero kusvika kuhuwandu huwandu hunoratidza izvo zviripo zvine simba kugadzirwa kudiwa kwemabhizimusi emotokari uye kuwedzera kwemutengo mumwe chete wekugadzira mota. Parizvino, mitengo yemotokari mapurasitiki, simbi mamiriro, matayi uye zvimwe zvikamu zvakawedzera, uye mitengo yesimbi dzakasiyana-siyana inodiwa pakugadzira muviri yaendererawo nekusimba.
Nekukwira kweizvo zviviri kuwanda nemutengo, makambani akanyorwa ezvikamu zvemotokari anozopa makadhi avo akajeka mukota yekutanga. Mukota yekutanga yegore rino, makumi maviri nemana makambani akanyorwa ezvikamu zvikuru zvemotokari akawana kukura kwakapetwa kaviri mumari uye purofiti yemari. Iyo mambure purofiti inoitiswa nemakambani evabereki senge Huayu mota uye Junsheng zvemagetsi zvakawedzera neinopfuura gumi muzana gore-ne-gore.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti nepo mutengo wekugadzira wemotokari imwe chete uri kuwedzera, makwikwi mumusika wekutengesa mota musika iri kuwedzera. Zvinoenderana nedhata remutyairi wemotokari Association, iyo yekuverenga yekutanga yambiro indekisi yevatengesi vemotokari muna Chivabvu yaive 52.9%, pasi ne1.3 muzana poindi yegore-gore-uye 3.5 muzana mapoinzi mwedzi pamwedzi zvichiteerana. Iyo Federation yakati musika wemotokari wanga wakagadzikana muna Chivabvu uye hausati wasvika pamamiriro anotarisirwa. Icho chikonzero ndechekuti kushomeka kwemachipisi kunotungamira mukudzikiswa kwekugadzirwa kwemotokari mabhizimusi, kugoverwa kwemamwe mamodheru anopisa kwakasimba, huwandu hwekutengesa hauna kugadzikana nekuda kwekuwedzera kwekutenderera kwemotokari, mari yevatengesi yakavharirwa mumotokari iyo nzira, iko kutendeuka kwakasimba, izvo mbishi zvinhu zvinokwira, zvigadzirwa zvevasimudziri zvakasimbiswa, uye kumanikidzwa kwebhizimusi kwevatengesi kunowedzerwa. Nemusika wemotokari unopinda mune yechinyakare isiri-mwaka muna Chikumi, iyi mamiriro anogona kuenderera.